Mividy tapakila any Eoropa lamasinina foana mahafaly. Voalohany indrindra, ao amin'ny Save A Train isika mitady foana vidiny ambany dia ambany-saran-dalana ho anao. Efa nisafo lohahevitra toy ny mahafinaritra trano fandraisam-bahiny ary tsara tarehy nandehanany fiaran-dalamby. Fa ny lohahevitra mafana indrindra ao amin'ny fiaran-dalamby orinasa no tontolo iainana. Ny Coradia Ilint dia izao tontolo izao voalohany iva-mitaingina lamasinina. ny angamba ny fiaran-dalamby tsara indrindra eto an-tany.
The Coradia Ilint dia hidrôzenina-monina ambany-mitaingina fiaran-dalamby. Ny nandehanany teo anelanelan'i Alemaina sy ny Repoblika Czech. Ny fiaran-dalamby vaovao vao avy nahavita ny iray 4 herinandro fitiliana hazakazaka. Nandritra ny fitsapana, ny fiaran-dalamby nankany amin'ny 80 KM isan'ora. Fitsapana ihany koa ny fanombanana ny fiatoana noho ny fiaran-dalamby. Mbola misy lafiny hafa ihany rehefa notsapaina mba hahazoana antoka ny fiaran-dalamby malamalama lalana.
Ny lamasinina vaovao no fiaran-dalamby solika mandeha amin'ny alàlan'ny hidrôzenina voalohany. Ihany koa mampiasa herinaratra ho an'ny vahana. Izay midika dia hanome eny aotra entona ihany no emitting Voafintina rano sy etona. Ny fiaran-dalamby dia mangina. Ny Coradia Ilint-tsoavaly ambany lamasinina dia manana ny lafiny miavaka manaraka;
Toyota Niezaka ihany koa ny fanatanterahana ity fomba hidrôzenina ny fiara dia toa toy ny fomba miasa amin'ny fiaran-dalamby fotsiny ihany. Ny fiaran-dalamby dia nomanina mba hanomboka ao amin'ny UK in 2021. Coradia Ilint lamasinina mitaingina ambany dia natomboka tamim-pahombiazana ankoatra an'i Alemana tamin'ny fiandohan'ny 2018. Mba ho ny fiaran-dalamby mba hiasa izany mila azy manokana hidrôzenina refueling toerana amin'izao fotoana izao, izay no misy eo amin'ny Salzgitter lalamby.
Lahatsoratra iray nozarain'i Maksim Tsurkov (@m_tsurkov)
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fworlds-first-low-riding-train%2F%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)